साउन ३, काठमाडौं (अस) । पूँजीबजारमा यतिबेला पूँजीगत लाभकर गणनाको प्रक्रियाको विषय बढी चर्चामा छ । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ गर्दै आएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले लाभकर गणनाको लागि लगानीकर्ताहरु...
abhiyan.com.np . १० महीना अघि पूरा समाचार पढनुहोस
साउन ३, काठमाडौं (अस) । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को प्रदेश–३ मा कमिटी गठन भएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा भएको प्रदेश स्तरीय भेलाले नविन ढुंगानाको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय ३ नम्बर प्रदेश कमिटी गठ...
अभियान संवाददाता साउन ३, काठमाडौं । यो साता नेप्से परिसूचक २३ दशमलव ९६ अंकले बढेको छ । गत साताको अन्तिम दिन असार २६ गते १ हजार २४८ दशमलव ५३ विन्दुमा बन्द भएको परिसूचक यो साताको बिहीवार (साउन २ गते...
साउन ३, वीरगञ्ज । मुलुकको कुल राजस्व असुलीमा ६० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वार्षिक राजस्व असुलीमा १९ प्रतिशतले कमी आएको छ ।...
साउन ३, काठमाडौं । व्यवसायीहरुले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएकाले मालबाहक ट्रक चलाउन नसकिएको बताएका छन् । यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी, यातायात मजदूरहरुको संयुक्त समित...
साउन ३, रोल्पा । शिलान्यास गरेको १० वर्षपछि रोल्पाको माडी खोला पुलले बल्ल पूर्णता पाएको छ । रोल्पाको पश्चिम भेगलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने उक्त पुल निर्माणपछि जिल्लाका आधा दर्जनभन्दा बढी गाउँपालि...
साउन ३, काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को निलम्बन यथावत् नै राखेको छ । इङ्गल्याण्डको लण्डनमा बिहीवार बसेको आईसीसीको बोर्ड बैठकले क्यान निलम्बन फुकुवाक...
साउन ३, वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकामा गत साताको दरमा सामान्य वृद्धि भएको अमेरिकी श्रम विभागले जानकारी दिएको छ । जुलाई १३ मा बेरोजगार भत्ताका लागि दाबी गर्ने अमेरिकीहरुको संख्या २ लाख १६ हजार प...
साउन ३, जाजरकोट । डोल्पालाई सडक सञ्जालले जोडे पनि हवाई जहाजमार्फत यात्रा गर्ने यात्रुको चापमा कमी आएको छैन । जुफालस्थित विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगम, तारा एयर, समिट एयर र सीता एयरले उडान भर्ने ...
मदन गिरी साउन २, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख ७६ हजार ५११ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार जिल्लास्थित विभिन्न...
चियामा मात्र नभइ इलाम कफीमा पनि उत्कृष्ट
साउन ३, इलाम । इलाम चियाको राजधानी हो । यहाँ मानिस चिया किन्न मात्र नभई चियाबारी क्षेत्र घुम्न पनि आउने गर्छन् । तर, पछिल्लो समय चियाका लागि प्रख्यात मानिने इलाममा कफी खेती पनि हुन थालेको छ । किसान...
पेचिङ (चीन) । अमेरिका–चीन व्यापारयुद्धका कारण आफ्नो उत्पादन चीनबाट बाहिर सार्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको संख्या ५० नाघेको छ । निक्केई एशियन रिभ्यूका अनुसार अमेरिकाले चिनियाँ सामग्रीमाथि बढाएको भन्सारस...
साउन ३, काठमाडौं (अस) । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालकमा सात जना संचालक चयन भएका छन् । कम्पनीको असार १३ गते सम्पन्न भएको सभाले आगामी चार वर्षको लागि संचालकहरुको निर्वाचन गरेको छ । कम...
नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतको डिजिटल कारोबार आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा ५१ प्रतिशत बढेको छ । भारतको इलेक्ट्रोनिक तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रविशंकर प्रसादले सो अवधिमा भारतको डिजिटल कारोबार ३१ अर्ब ३३ करोड ...
साउन ३, काठमाडौं । शुक्रवार कुमारी बैंक लिमिटेडको १ करोड ५२ लाख २१ हजार ७ सय ८१ कित्ताको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । उक्त शेयरको कारोबार आउँदो आइतवार (साउन ५ गते)देखि शुरु हुनेछ ।
साउन ३, काठमाडौं (अस) । भार्गव विकास बैंक लिमिटेडको शेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन भएको छ । रजिष्ट्रार कार्यलयबाट जेठ ३० गते प्रबन्धपत्र नियमावालीमा संशोधन भए अनुसार संस्थापक समूहको शेयर ५५ दशमलव ५...
पेरिस (फ्रान्स) । निशानका पूर्व अध्यक्ष कार्लोस गोनले जापानी सवारीसाधन निर्माता कम्पनी निशान मोटर्स र मित्सुबिसी मोटर्सविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । फ्रान्सेली समाचारपत्रमा बुधवार प्रकाशित समाचार...
साउन ३, काठमाडौं (अस) । मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले मर्जर तथ एक्वारको लागि संचालक सुमित बाबु खत्रीको संयोजकत्वमा मर्जर समिति गठन गरेको छ । कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इज...
चीनको ऋण जीडीपीको ३ गुणाभन्दा बढी
पेचिङ (चीन) । चीनको समग्र ऋण ३०० प्रतिशत नाघेको छ । अमेरिकी उद्योग संघ इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल फाइनान्स (आईआईएफ) का अनुसार सुस्ताउँदो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउन चीनले विभिन्न योजना ल्याइरहेको ...
साउन ३, काठमाडौं (अस) । माछापुच्छ्रे बैंकले चालू आवको चौथौ त्रैमासिक विवरण प्रकाशित गरेको छ । बैंकले एनएफआरएस प्रणाली अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको हो । उक्त विवरण अनुसार...
साउन ३, काठमाडौं (अस) । नेष्डो समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साउन १८ गते विशेष सभा आयोजना गरेको छ । कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्नको लागि १ बराबर १ दशमलव ५ को अनुपातमा हकप्रद शेयर पारित गर्...
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, ३ साउन २०७६)
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गर्न लागेको ७० प्रतिशत हकप्रद शेयरलाई केयर रेटिङ नेपालले ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । कम्पनीले पूँजीवृद्धिका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको हो । ग्रेड ४ ...
कम्पनीको शेयरमूल्य १ वर्षको कारोबार अवधिमा अधिकतम रू. ९६० र न्यूनतम रू. ७३० पुगेको छ । बिहीवार कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रही रू. ७८० कायम भएको छ । सो दिन कम्पनीको १ हजार ९० कित्ता शेयर खरीदविक्री भए...
कम्पनीले २०७५/७६ को लाभांश नदिने भएको छ । एनएफआरएस प्रणाली अनुसार रू. २४ करोड ७६ लाख नाफा आर्जन गरे पनि जगेडा कोषमा कायम गर्नुपर्ने भएकाले लाभांश नदिने भएको हो । कम्पनीले लाभांश नदिने भएपछि कम्पनीक...
जीवन बीमा कम्पनीहरूले पुर्‍याउनुपर्ने रू. २ अर्ब चुक्ता पूँजी पु¥याएर पनि लगानीकर्तालाई बोनस शेयर प्रदान गरेको यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ३ अर्ब ७४ लाख ४० हजार पुगेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७...
छिमेक लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा शेयरधनीहरूका लागि १८ प्रतिशत बोनस शेयर र २२ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ । कम्पनीले जेठ ५ गतेदेखि उक्त लाभांश वितरण शुरू गरेको छ । कम्पनीको १ वर्षको कारोबारमा ...
विजयदीप लेवोरेटरिजको विशेष सभा साउन २४ गते
साउन ३, काठमाडौं । विजयदीप लेवोरेटरिज लिमिटेडले विशेष सभा साउन २४ गते धोवीघाट, अगेनो दि हेस्टीयामा दिनको ११ बजे गर्न लागेको छ । कम्पनीको सभाले आंशिक असुरक्षित कर्जालाई शेयर पूँजीमा परिणत गर्ने प्रस...
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको शतप्रतिशत हकप्रद आउँदै
साउन ३, काठमाडौं (अस) । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर साउन २१ गतेदेखि निष्कासन गर्न लागेको छ । कम्पनीको रू. १ सय अंकित दरको ११ लाख ४ हजार ५ सय ७५ कित्ता हकप्र...
अधिकांशले व्यस्तता, अल्छीपन लगायत विभिन्न कारण पिसाब रोकेर बस्छन् । तर यस्तो बानीले पिसाबसम्बन्धी समस्या निम्तिन्छ । लामो समयसम्म पिसाब रोकेर बस्दा ब्ल्याडरमा ब्याक्टेरिया जम्मा हुन पुग्छ । यही ब्य...
काठमाडौं । जर्मनीसँगको व्यापारघाटा कम गर्न नेपालबाट निर्यात बढाउने योजना नेपाल–जर्मन चेम्बर अफ कमर्शले बनाएको छ । त्यसका लागि नेपालबाट पश्मिना, गलैंचा, अदुवा, ऊनी फेल्ट र ह्यान्डिक्राफ्टको निर्यात ...
काठमाडौं (अस) । मेभोक्स हेलमेटको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सत्यदीप इन्टरनेशनलले बिहीवार रिटेलर मीट कार्यक्रमको आयोजना गरी हेलमेट सार्वजनिक गरेको छ । सन्धार एमकिन इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेका मेभोक...
काठमाडौं । काठमाडौं म्यारियट होटेलले आयुर्वेदिक सिग्नेचर ट्रिटमेन्ट (आयुर्वेदिक उपचार) र आधुनिक थेरापी सेवा दिने भएको छ । होटेलले सफ्ट लन्चमार्फत गत वैशाखदेखि उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । होटेल...
काठमाडौं (अस) । नेपाल रेडक्रसले लगातार परेको वर्षाबाट आएको बाढी, पहिरो र डुवानबाट ९० हजार परिवारका करीब ४ लाख ५२ हजार मानिसहरू प्रभावित भएका र ४० हजार घरहरूमा क्षति पुगेको अनुमान गरेको छ । यो तथ्या...
काठमाडौं (अस) । लिभिङ विथ आईसीटीको आयोजनामा हुन लागेको आईसीटी अवार्ड २०१९ अन्तर्गत तीन विधामा उत्कृष्ट पाँचको घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत स्टार्टअप आईसीटी अवार्ड, प्रोडक्ट आईसीटी अवार्ड र राइजिङ स्...
काठमाडौं (अस) । सिभिल बैंक आईएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणित बैंक बन्न सफल भएको छ । बिहीवार सुन्धारास्थित कर्पोरेट कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा यूनाइटेड रजिस्ट्रार अफ सिस्टमका नेपाल प्रतिनिधि प्रकाश पौडेलल...
विराटनगर (अस) । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेशस्तरीय कृषि उद्यम केन्द्र विराटनगरमा स्थापना भएको छ । प्रदेश राजधानी विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा बिहीवार महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले प्रदेशस्...
सुनसरी (अस) । गत असार १४ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले बिहीवार पदभार ग्रहण गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले ए...
काठमाडौं (अस) । एनसीसी बैंकले भक्तपुर, सानोठिमीस्थित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयलाई गत असार ३० गते सोमवार रू. ५ लाख सहयोग गरेको छ । प्राविधिक शिक्षालयको हाताभित्र रहेको खुला मञ्चमा ट्रस्ट र छाना नि...
bbc.com . २३ घण्टा अघि
bbc.com . १५ घण्टा अघि
news24nepal.tv . १३ घण्टा अघि